“Waxaan ahay mid ka mid ah taageerayaashiisa” – Perez oo maanta laabta ku galiyay Ronaldo caasimadda Spain ee Madrid… + SAWIRRO – Gool FM
“Waxaan ahay mid ka mid ah taageerayaashiisa” – Perez oo maanta laabta ku galiyay Ronaldo caasimadda Spain ee Madrid… + SAWIRRO
Dajiye July 29, 2019
(Madrid) 29 Luulyo 2019. Saxaafada dalka Spain ayaa tooshka ku ifisay arrinta ku saabsan in Florentino Perez uu laabta galiyay xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo, kaddib markii uu maanta gudoomay abaalmarin cusub.
34 jirka reer Porugal ayaa maanta ku laabtay caasimadda Spain ee Madrid si uu u gudoomo abaalmarinta “MARCA Legend”, iyada oo lagu sharfayo guulaha waaweyn uu ka soo sameeyay kooxda Real Madrid.
Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu 9 sano ku qaatay kooxda Real Madrid, isagoo kula guuleystay koobab badan, gaar ahaan 4 jeer oo ah tartanka Champions League, wuxuuna noqday gooldhaliyaha taariikhiga ah ee kooxda, kaddib markii uu dhaliyay 450 gool.
Yeelkadeeda, Florentino Perez ayaa laabta galiyay Cristiano Ronaldo inta lagu gudi jiray xafladda, isagoo dhowr erayo dhegta ugu sheegay, balse lama shaacinin ilaa iyo haatan waxa uu u sheegay ee aan ka aheyn sawirada ay ku mideysnaayeen.
Waxaa jiray warar xan ah ee ku saabsanaa in xiriirka u dhexeeyay Florentino Perez iyo Ronaldo uu xumaaday xagaagii la soo dhaafay, taasoo keentay in Peres uu diiday inuu wanaajiyo qandaraaska Cristiano, waxayna ugu dambeyntii arrintan sababtay inuu u dhaqaaqo magaalada Turin, gaar ahaan kooxda Juventus.
Sida laga soo xigtay wargeyska “AS” ee dalka Spain Florentino Perez ayaa wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay inuu taageero u yahay Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri:
“Waxaan ahay mid ka mid ah taageerayaashiisa waana kan ugu fiican, waxaan u xiisi doonaa cimrigiisa oo dhan!”.